सकियो निफ चलचित्र महोत्सव : बुख्याँचा उत्कृष्ट चलचित्र
जनतापाटी सोमबार, वैशाख २७, २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । विश्वका कथाहरुको उत्सव’भन्ने नाराका साथ नेपाल अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ)को चौथो संस्करण आजदेखि समापन भएको छ । चलचित्रमार्फत नेपालीकला, संस्कृति र पर्यटन विश्वभरि फैलाउने निफको उदेश्य रहेको निफको जुममार्फत कार्यक्रमको समापन सत्रमा फैजिया फथिमाले निफमा स्तरीय कथा आउने गरेको र आफू यसमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहँदा खुशी लागेको बताए ।
पोर्चुगलका चलचित्र निर्माता ज्वाओ पाउलो मकेडोले विश्वभरका कला, संस्कृति तथा भूगोललाई निफले केन्द्रीकृत गर्न सफल रहेको बताए । मधुरिमा बारुवाचले प्रेमेन्दर मजुमेण्डरले केही समयअघि नेपालको दोलखा घुम्दा रोचक लागेको र चलचित्रका लागि उत्कृष्ट लागेको बताए ।
निफको आजको शुरुआती सत्रमा चलचित्रको आर्थिक एवं गुणात्मकस्तरबारे बहस गरिएको थियो । कार्यक्रममा लेखक युग पाठकले चलचित्र समाजकोे भाषा र संस्कृति देखाउने ऐना भएको र यसले विचारको प्रतिनिधित्व गरेको बताए ।
लेखक तथा पत्रकार बविता बस्नेतले अबका चलचित्रमा महिलाको यथार्थ देखाइनुपर्ने तथा रोनाधोना, देवी वा बोक्सी मात्र नदेखाई जीवन झल्कने सफलताको कथा पनि समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साहित्यकार कृष्ण धरावासीले संसारभरिका चलचित्र हेरेका दर्शकलाई अब नेपाली चलचित्रले आकर्षण गर्नुपर्ने भनाइ राखे ।
एकैपटक ५२ एसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे ? [नामावलीसहित] ५३ मिनेट पहिले
नेपाल प्रहरीका ५७ डीएसपीको सरुवा, को कहाँ ? ५८ मिनेट पहिले